काेराेना सं*क्रमितकाे संख्या ३४ लाख नाघ्याे : एकैदिन १ लाख सं*क्रमित, ६ हजारकाे मृ त्यु! – Butwal Sandesh
काेराेना सं*क्रमितकाे संख्या ३४ लाख नाघ्याे : एकैदिन १ लाख सं*क्रमित, ६ हजारकाे मृ त्यु!
काठमाडाैं, २० वैशाख । विश्वमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-१९ बाट सं*क्रमित हुनेकाे संख्या ३४ लाख नाघेकाे छ । विभिन्न तथ्याङ्क निकाल्ने संस्था वर्ल्डो मिटर्स डट इन्फोका अनुसार शनिबार बिहानसम्म काेराेना सं*क्रमितकाे संख्या ३४ लाख १ हजार ३१८ जना पुगेको छ । काेराेना भाइरसका कारण ज्या*न गुमा*उनेकाे संख्या भने २ लाख ३९ हजार ६१४ पुगेकाे छ ।
पछिल्लाे २४ घण्टामा मात्रै ९६ हजारभन्दा बढी नयाँ सं*क्रमित थपिएका छन् भने झण्डै ६ हजरकाे मृ त्यु भएकाे छ । शुक्रबार बिहानसम्म काेराेना सं*क्रमितकाे संख्या ३३ लाख ४ हजार ३०९ थियाे भने मृ त्यु हुनेकाे संख्या २ लाख ३३ हजार ८३९ थियाे ।
स*ङ्क्रमितमध्ये १० लाख ८१ हजार ७०५ जना भने उपचारपछि घर फर्किएका छन् । अहिले विश्वभर २० लाख ७८ हजार बढी जनामा कोरोना भाइरस सक्रिय देखिएको छ । तीमध्ये ५१ हजार ३५१ जनाकाे अवस्था भने गम्भीर रहेको छ ।
कोरोनाको उद्गम स्थल चीन भए तापनि कोरोना सं*क्रमणबाट सबैभन्दा बढी मृ त्यु हुनेमा अमेरिका पर्छ । अहिलेसम्म अमेरिकामा ६५ हजार ७७६ जनाको मृ त्यु भइसकेको छ । सं*क्रमितकाे संख्या भने ११ लाख ३१ हजार भन्दा बढी पुगेकाे छ ।
सं क्रमितमध्ये १ लाख ६१ हजार ५६३ जना पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ९ लाख ३ हजार बढीमा कोरोनाको सक्रिय रहेको छ । सं,क्रमितमध्ये १६ हजार ५८१ काे अवस्था ग म्भीर रहेको छ ।
अमेरिकापछि कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मृ त्यु हुनेमा इटाली पर्छ । अहिलेसम्म इटालीमा कोरोनाका कारण ज्या न गुमाउनेकाे संख्या २८ हजार २३६ पुगेकाे छ । अहिलेसम्म त्यहाँ २ लाख ७ हजार ४२८ जना कोरोनाबाट सं क्रमित भएका छन् ।
सं क्रमितमध्ये ७८ हजार २४९ पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले इटालीमा एक लाख बढीमा काेराेना सक्रिय रहेकाे छ भने १५ सय बढीकाे अवस्था गम्भी र रहेकाे छ । कोरोनाले भ,यावह पारेको अर्को देश हो, स्पेन । स्पेनमा इटालीमा भन्दा पनि बढी सं क्रमित छन् । अहिलेसम्म स्पेनमा काेराेना सं क्रमितकाे संख्या २ लाख ३९ हजार ६३९ पुगेकाे छ ।
स्पेनमा कोरोनाका कारण २४ हजार ८२४ ले ज्या न गुमाएका छन् । सं क्रमितमध्ये १ लाख ४२ हजार ४५० भने पूर्णरूपमा निकाे भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ७५ हजार ७१४ जनामा कोरोना सक्रिय रहेको छ । तीमध्ये २ हजार ५ सयकाे अवस्था भने ग म्भीर रहेको छ । कोरोना सं क्रमण हुने देशमा चीनभन्दा अगाडि जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, टर्की, रूस, ब्राजिल र इरान पनि रहेका छन् ।
अहिलेसम्म बेलायतमा कोरोनाका कारण मृ त्यु हुनेकाे संख्या २७ हजार ५१० पुगेकाे छ । सं क्रमितकाे संख्या भने १ लाख ७७ हजार ४५४ पुगेकाे छ । बेलायतमा पूर्ण निको हुनेको संख्या एकदमै कम रहेको छ । त्यहाँ अहिले १ लाख ४९ हजार बढीमा कोरोना सक्रिय रहेको छ भने १५ सय बढीकाे अवस्था ग म्भीर रहेकाे छ ।
कोरोनाले भ,यावह बनाएकाे अर्काे देश हाे, फ्रान्स । फ्रान्समा अहिलेसम्म कोरोना सं क्रमितको १ लाख ६७ हजार नाघेको छ भने मृ त्यु हुनेको संख्या २४ हजार ५९४ पुगेको छ । सं क्रिमतमध्ये ५० हजार बढी पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ९२ हजार बढीमा काेरोना संक्रिय रहेको छ । तीमध्ये ३ हजार ८७८ काे अवस्था भने ग म्भीर रहेको छ ।
जर्मनीमा पनि कोरोना सं क्रमित हुनेको संख्या १ लाख ६४ हजार पुगेकाे छ । मृ त्यु हुनेको संख्या भने ६ हजार ७३६ पुगेको छ । अहिले जर्मनीमा ३० हजार ४४१ जनामा मात्रै कोरोना सक्रिय रहेको छ । सं क्रमितमध्ये १ लाख २६ हजार ९ सय भने पूर्णरुपमा निको भइसकेका छन् । जर्मनीमा यति निको हुनु भनेको सुखद पक्ष हो ।
टर्कीमा पनि काेराेना सं क्रमित हुनेकाे संख्या एक लाख २२ हजार नाघेकाे छ । अहिलेसम्म त्यहाँ ३ हजार २५८ जनाकाे मृ त्यु भएकाे छ । सं क्रमितमध्ये ५३ हजार ८०८ भने पूर्णरूपमा निकाे भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ६५ हजारमा काेराेना सक्रिय रहेकाे छ । यता रूसको अवस्था पनि उस्तै छ । अहिलेसम्म रूसमा एक लाख १४ हजार बढी मानिस काेराेनाबाट सं क्रमित भएका छन् । काेराेनाका कारण मृ त्यु हुनेकाे संख्या भने १ हजार १६९ पुगेकाे छ । सं क्रमितमध्ये १३ हजार बढी पूर्णरूपमा निकाे भएका छन् । अहिले त्यहाँ २ हजार ३ सयकाे अवस्था ग म्भीर रहेकाे छ ।
इरानमा टर्की र रूसमा भन्दा कम सं क्रमित भए पनि मृ तककाे संख्या भने बढी रहेकाे छ । अहिलेसम्म इरानमा काेराेनाका कारण ज्या न गुमाउनेकाे संख्या ६ हजार नाघेकाे छ । अहिलेसम्म त्यहाँ साढे ९५ हजार ६४६ सं क्रमित भएका छन् । सं क्रमितमध्ये ७६ हजार बढी निकाे भएका छन् ।
ब्राजिललाई पनि काेराेनाले निकै सताएकाे देखिन्छ । अहिलेसम्म त्यहाँ काेराेनाबाट सं क्रमित हुनेकाे संख्या ९२ हजार नाघेकाे छ भने काेराेनाका कारण ६ हजार ४१० जनाकाे मृ त्यु भएकाे छ । सं क्रमितमध्ये ३८ हजार पूर्णरूपमा निकाे भएका छन्, ८ हजार बढीकाे अवस्था ग म्भीर रहेकाे छ ।
कोरोनाको उद्गम स्थल चीन भने अहिले ५५७ जनामा मात्रै कोरोना सक्रिय रहेको छ । त्यहाँ ७७ हजार ६८५ जना भने पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । चीनमा अहिलेसम्म कुल ८२ हजार ८७५ जनामा कोरोनाको सं क्रमण देखिएको छ ।
त्यस्तै गरि छिमेकी देश ईन्डिया र पाकिस्तानमा कोरोना सं,क्रमण बढिरहेकोको छ भने नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन १/२ गर्दै बढिरहेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म दुई अंंकमै सिमित छ जुन हाम्रो जस्तो देशको लागि खुशीको कुरा हो । नेपालमा यो समाचार तयार पार्दा सम्म ५९ जना सं,क्रमीत भएको खबर छ । – Butwalsandesh.com